Degmooyin iyo Gobalo kamid ah DDS oo aan yeelan doonin Xildhibaano matala (Warbixin) – Idil News
Degmooyin iyo Gobalo kamid ah DDS oo aan yeelan doonin Xildhibaano matala (Warbixin)
Madaxweynaha Dowlad Degaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumud Cagjar, ayaa ku guuleystay dadaal uu galay, sidii codeynta doorashada Dowlad Degaanka loo hareer marin lahaa Degmooyin badan oo kamid ah Degaanka, kuwaas oo uu u arko in uusan cod ka helin doonin isaga iyo xisbigiisu.
Degmooyinka aan lagu qaban-doonin Doorashada Degaanka ayaa weyn doona Xildhibaanada ku matali lahaa Baarlamaanka Dowlad Degaanka iyo heer Federaal, iyadoona sidoo kale lumin doona Degmo-nimada iyo maamul magaalo-nimada, waxaana ay kala yihiin:
Degmooyinka Gobolka Faafan ee laga noqdey.
1.Degmada Qooraan oo rugteedu noqonayso Mula
2.Degmada Harawo oo rugteedu noqonaysoDharwanaaje
3.Degmada Jigjigada Galbeed oo rugteedu noqonaysa Haroorayso
5.Maamulka magaalada Qabribayax.
6.Maamulka magaalada Wajaale.
Degmooyinka Gobolka Jarar ee laga noqdey”
2) Degmada Dig.
Degmooyinka Gobolka Qoraxay ee laga noqdey.
1) Degmada Boodalay.
2) Degmada Higlooley.
3) Degmada Laas-dhankayre.
4)Degmada Goglo oo rugteedu tahay Kudunbuur
5)Degmada ceel ogaadeen
Degmooyinka Gobolka Liibaan ee laga noqdey”
1.Degmada Boqol maayo.
Degmooyinka Gobolka Shabeele ee laga noqdey.
Degmooyinka Gobolka Afdheer ee laga noqdey”
Degmooyinka Gobolka Sitti ee laga noqdey.
2.Degmada Goota-biki oo xaruntu noqonayso Biki
Degmooyinka ee Gobolka Doollo ee laga noqdey”
Degmooyinka ee Gobolka Nogob ee laga noqdey”
Labada Gobol ee yeelan doonin Xildhibaano heer Federal”
Dastuurka Dowlad Degaanka Itoobiya iyo kan Dowladda Federaalka, ayaa dhigaya in Degmadii aan matalaad ka helin Baarlamaanka labada heer, aysan sii ahaan Karin Degmo, doorasho kaddib, waxaana ay tani ka dhigan tahay in Magaalooyinkan ay dib ugu laaban doonaan Degmooyinkii horey looga maamuli jirey.
Dadka ka faalooda arrimaha Dowlad Degaanka Soomaaliya ayaa aaminsan in tani ay muujinayso in Madaxweyne Mustafe Cagjar uu dagaal gaar ah kula jiro Beelo gaar ah oo ku xooggan Degaanka, kuwaas oo kala ah Beelaha “Reer Cabdille iyo Majeerteen” oo u arko inay kazoo hor-jeedaan xukunkiisa.
Inta badan Degaanka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa laga dareemayaa kicin looga soo hor-jeeda go’aankan iyo xukunka Madaxweyne Cagjar, oo lagu dhaliilo in mudadii uu talada hayay ku mashquulay bartilmaameedka beelo gaar ah.